Isaky ny andro, tokony ho 780 000 ny olona ho amin'ny finoana an'i Jesoa!
Mbola tsy nisy mihitsy tantara dia maro no voavonjy manerana izao tontolo izao amin'ny androntsika. Isika dia miaina ao anatin'ny fotoana lehibe indrindra manerana izao tontolo izao notsimponina no vokatra in!
Maro no sahirana miandry ny efitra lehibe ny fotoana. Fiheverana fifohazana noho ny anjara, dia voailika tanteraka. Nefa, ry malala: izao lasa generalfel. Misy fifohazana lehibe eo amin'ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana izao! Mbola tsy nisy mihitsy tantara no maro no namonjena tahaka ny amin'izao fotoana izao. Eo ho eo ka 780 000 ny olona hanaiky an'i Jesosy ary ho voavonjy isan'andro manodidina ny tany!
Antoka, dia ambany ihany koa ny fandaniam-potoana, mba ho fantatsika ihany, nefa Aza mibanjina jamba fako, fa mifalia, olona maro tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra isan'andro. Indraindray aho mieritreritra ny apostolin'i Jesosy 'ny fotoana dia saro-piaro amintsika amin'izao fotoana izao, izay ho anjara amin'izao fotoana manan-tantara fa ankehitriny velona ao. Ny fotoana izao tontolo izao lehibe indrindra notsimponina no vokatra in!
World ny fifohazana mandeha amin'izao fotoana izao
Mbola tsy nisy mihitsy tantara dia maro no voavonjy manerana izao tontolo izao araka ny mitranga ankehitriny. Isaky ny andro, tokony ho 780 000 ny olona ho amin'ny finoana an'i Jesoa!
Manantena izahay fa amin'izao fotoana izao dia misy ny 2,5 lavitrisa ny Kristianina eo amin'izao tontolo izao.
70% ireo efa tonga saina ny finoana nandritra ny taona 1900, manao 1,75 lavitrisa.
Ireo, 1,75 tapitrisa, 70% amin'izy ireo tonga ny finoana aorian'ny 1945, izany hoe momba ny 1,2 lavitrisa.
Ireo, 1,2 lavitrisa izay nino taorian'ny 1945, 70% nino ny telo taona.
Midika izany fa tokony ho 857 tapitrisa nino ny telo taona lasa.
Midika izany fa tokony ho 285 tapitrisa nino tsirairay tato anatin'ny telo taona, ary mbola mitohy ny fifohazana.
Na inona na inona ianao fanadihadiana, hitanao fa mitombo be ny hamafin'ny amin'ny androntsika.
780 000 isan'andro
Raha mbola hitoerako eto ny kajy manokana amin'ny taonjato, 285 tapitrisa dia ho voavonjy isan-taona dia ho tahaka izany ny:
23,7 tapitrisa namonjy isam-bolana
5.5 tapitrisa namonjy isan-kerinandro
780 000 namonjy isan'andro
Izahay miatrika izao tontolo izao lehibe indrindra ny fifohazana! Mbola tsy nisy mihitsy tantara dia maro no voavonjy manerana izao tontolo izao araka ny mitranga ankehitriny.